Isikhulu Esiphezulu seKuCoin: I-Hack eyi- $ 150 Million Hack "Incane" KuKuCoin, Umshuwalense Uzomboza | ICoinGenius Ibamba Umcimbi we-Virtual Crypto
Emfudlaneni obukhoma ozinikele, isikhulu esiphezulu seKuCoin kuphawulwe ukuthi yize kungani engakwazi ukudalula ukuthi ingakanani impahla yenkampani ethinteke ngesikhathi sokugenca, imali yesikhwama ebiwe "incane kuKuCoin." Ukushintshaniswa kuzokhokha konke ukulahleka ngesikhwama sayo somshuwalense.
Le nkampani iqale yabona ukungajwayelekile ngo-2: 51 AM, Septhemba 26, ngenkathi ithola isexwayiso esivela ohlelweni lwayo lwangaphakathi lokuqapha ubungozi. Kube sekulandela ezinye izexwayiso, okukhombisa ukudluliswa okungajwayelekile kusuka esikhwameni esishisayo.
Isikhulu esiphezulu seKuCoin uJohnny Lyu. Umthombo: YouTube
Ngo-3: 01 AM, ukushintshaniswa kuthole isexwayiso mayelana nebhalansi esele kusuka ohlelweni lokuqapha. Ngemuva kwemizuzu emithathu, kungene ezinye izexwayiso ezikhombisa ukuhoxiswa okungajwayelekile kweXRP, okwalandelwa esinye isexwayiso sokuthi isikhwama senkampani esishisayo “siyaphela.
Izexwayiso ezalandela phakathi kuka-3: 05 ekuseni no-3: 40 ekuseni zikhombise ukuhoxiswa okungavamile kwe-BTC kanye namanye amathokheni.
Ngenkathi ukuhoxiswa okungajwayelekile kuqhubeka, inkampani yasungula iqembu eliphuthumayo lase livala amaseva alo esikhwama. Kodwa-ke, ukuvalwa shaqa akwenzi lukhulu ekunqandeni abaduni njengoba ukudluliswa okungajwayelekile kuqhubeka.
Ngalesi sikhathi, uKuCoin wabona ukuthi okhiye abazimele besikhwama saso esishisayo babeputshukile. Le nkampani bese iqala ukuhambisa ibhalansi esele esikhwameni sayo esishisayo iye endaweni yokugcina ebandayo ngo-4: 20 ekuseni. Le nqubo yathatha cishe imizuzu engama-30 ukuqeda.
ULyu uthe lokhu kushintshisana kuzoshicilela amakheli asetshenziswa ngabaduni kuziteshi zawo ezisemthethweni. Ngaphambilini umbiko ku-hack kukhombisa ukuthi ikheli le-Ethereum okuthiwa lisetshenziselwe lo msebenzi liqukethe ngaphezu kwezigidi ezingama- $ 150 kumathokheni we-ETH ne-ERC-20.
IKuCoin manje isiyathintana futhi isebenza namaphoyisa omhlaba, amaklayenti ayo amakhulu, kanye nochwepheshe bemboni ukuze kwenziwe uphenyo olunzulu ngalesi sigameko.
Isikhulu esiphezulu sathi futhi bacele iningi lokushintshana nge-crypto, kufaka phakathi iBinance, iBitfinex, i-OKEx, iBitMEX, neHoubi Global, ukuthi babhale ohlwini lwabaduni futhi basize ngophenyo.
Umphakathi we-crypto washesha ukwenza isenzo sokusiza iKuCoin esicelweni sayo. IBitfinex CTO uPaolo Ardoino wathi sebenamakhaza ayi-13 million USDT ku-EOS okwakuyingxenye yokugenca, kuyilapho uTether efriza i-20m USDT ku-Ethereum kukheli le-ETH elisetshenziselwa ukugenca.
Ngenkathi izinsizakalo zokuhweba zisatholakala, ukuhoxiswa kwemali kanye nokufakwa kwemali kuzohlala kuvaliwe kuze kube yilapho ukushintshaniswa kuqeda ukuthuthukiswa kwesikhwama sayo.
Izihloko ezihlobene:ikheliAmakheliizimpahlaBinanceI-BitFinexI-BitmexBlacklistblockchainBTCCeoisitoreji esibandayoCommunitycryptoUmphakathi we-CryptoAma-Crystal ExchangeidiphoziBAKHALAEOSI-ERC-20I-ETHEthereumukushintshanisaUkuhwebelanaOkukhethekileIzimaliisikhwamaikusasaHackkubaduniI-Hot WalletIndustryInsuranceuphenyoKuCoinukuqaphaOKExUPaolo ArdoinoamaphoyisaImisebenzishareUxhasiweisitorejii-tetherUkushintshaniswaAmadokhumentiUkuhwebaUSDTisikhwamaI-XRP